လူ ဦး ရေ ၇၈၅ သန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေသန့်သောက်သုံးရန်မတတ်နိုင်ကြပါ - WorldRef
ဇူလိုင်လ 10th, 2021
လူသားများသည်အစားအစာမပါဘဲ ၃ ပတ်ရှင်သန်နိုင်သော်လည်းရေမပါဘဲ ၃ ရက်မှ ၄ ရက်အထိအသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောရေသည်ဘဝ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောသန့်ရှင်းသောရေရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်း၏ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့အကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေသည်။
2021 ၏အဖြစ်, 785 လူ ဦး ရေသန်းသည်အခြေခံသောက်သုံးရေရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ 144 တည်းကကုသမှုမရှိဘူးမျက်နှာပြင်ရေကိုသောက်သောသူသည်သန်း။
အလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ရေ၏အရည်အသွေးသည်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ အခြေခံသောက်သုံးရေဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြီးမားသောကွာဟမှုရှိသည်။ အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးအေ)၊ အူရောင်ငန်းဖျားနှင့်အခြားအရာများစသည့်အန္တရာယ်ရှိသောရောဂါများကိုကူးစက်စေသည်။
ဝမ်းပျက်ခြင်း လူသိအများဆုံးအန္တရာယ်ရှိသောရောဂါသည်ရေကို အသုံးပြု၍ ကူးစက်သည်။ ညစ်ညမ်းသောရေကိုသောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ဝမ်းလျှော 485 000 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသေဆုံးမှု။ 2017 ခုနှစ်တွင်န်းကျင် 220 သန်း ကူးစက်ခံရသည့်ရေကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ကူးစက်သောကပ်ပါးကောင်များမှဖြစ်သည့်နာတာရှည်ရောဂါ - လူများသည် schistosomiasis အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကုသမှုလိုအပ်နေသည်။
ညစ်ညမ်းနေသောသောက်ရေသည်သေစေနိုင်သောရောဂါများကိုကူးစက်စေရုံသာမကသေစေနိုင်သည်။ ပတ်ပတ်လည် 1.23 သန်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မလုံခြုံသောရေကိုသောက်သုံးမှုကြောင့်လူများသေဆုံးခဲ့သည် (ပုံ - ၁) ။
အန္တရာယ်ကင်းသောရေကို ၁၉ နေရာတွင်သတ်မှတ်ထားပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသေဆုံးမှုများအတွက်အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းများနှင့်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်လာသည်။
၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ အထိလူ ဦး ရေ၏ ၀ င်ငွေမြင့်မားသောရေတွင်တိုးတက်သောရေအရင်းအမြစ်ရရှိမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၀ င်ငွေမြင့်မားသောအုပ်စုသည်ဤအရင်းအမြစ်များကို ၁၀၀% သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ ၀ င်ငွေနည်းပါးသောလူ ဦး ရေကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေသည် 46% 1990 ခုနှစ်တွင်ကမှထ 66% 2015 ခုနှစ်တွင် (ပုံ - 2) ။
2017 ခုနှစ်, 90% ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏တိုးတက်လာသည့်ရေအရင်းအမြစ်များကိုရရှိခဲ့သည် တိုးတက်လာသောသောက်ရေသန့်နည်းပညာများကြောင့်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ရေညစ်ညမ်းမှုမှကင်းဝေးစေသည်။
သောက်ရေသန့်ရရှိမှုနှင့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားသည်ယူကေတွင်မပြောင်းလဲသေးပါ။ အကြောင်းမှာလူများသည်ဤအရင်းအမြစ်များကို ၁၀၀% ခံစားခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးနှင့်အိုင်ယာလန်တို့ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အခြေအနေမှာပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းအခြေအနေများစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ တိုးတက်လာသောရေအရင်းအမြစ်များရရှိမှုသည်မြင့်တက်လာသည် 43% 1990 အတွက် 63% 2015 ခုနှစ်တွင် (ပုံ - 3)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်သောသောက်သုံးရေရရှိနိုင်သောလူ ဦး ရေအချိုးအစားမှမြင့်တက်လာသည် 76% 1990 အတွက် 91% လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်သောသောက်သုံးရေရရှိနိုင်သောလူ ဦး ရေတိုးပွားလာခဲ့သည် 107 သန်း ပျမ်းမျှအားဖြင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ နေ့စဉ်အခြေခံတွင်, 290,000 လူတို့သည်သောက်သုံးရေရရှိခဲ့ကြသည်။ (ပုံ ၄)
အာရှနှင့်အာဖရိကရှိလူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်ကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်ပြီးဝင်ငွေနည်းအုပ်စုတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောမိသားစုများသည်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
နိုင်ငံအားလုံးသည်တန်းတူညီမျှမှုမျဉ်းအထက်တွင်ရှိနေသည် (တိုင်းပြည်ကဤမျဉ်းတစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိပါကမြို့ပြနှင့်ကျေးလက်နေလူ ဦး ရေအချိုးအစား (ဥပမာ - အစ္စရေး)) အတူတူပင်ဖြစ်သည် (အထူးသဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ) ။ အီသီယိုးပီးယားတွင်အန္တရာယ်ကင်းစွာသောက်သုံးရေရရှိနိုင်သောမြို့ပြလူ ဦး ရေ၏ဝေစုမှာန်းကျင်ရှိသည် 39% ကျေးလက်နေစဉ်အတွင်းပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခဲ့သည် 4%။ ယူဂန္ဓာတွင်မြို့ပြလူ ဦး ရေ၏ဝေစုမှာတစ်ဝက်ခန့်သာရှိသည် 18% နှင့်ကျေးလက်အဘို့, ကပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခဲ့သည် 4%။ လုံခြုံစိတ်ချရသောသောက်သုံးရေရရှိနိုင်သောလူ ဦး ရေအချိုးသည်ကျေးလက်ဒေသများထက်မြို့ပြေဒသများ၌ ပို၍ လိုလားကြသည် (ပုံ - ၅) ။
1990 ခုနှစ်တွင်နီးပါး 42% တိုးတက်လာသောသောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များကိုမရရှိနိုင်သူများသည်အရှေ့အာရှနှင့်ပစိဖိတ်မှဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထိုအရေအတွက်ကျဆင်းခဲ့သည် 20%။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိက, ပတ်ပတ်လည်၌တည်၏ 1.17 ဘီလီယံအထိ ၁၉၉၀ တွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောသောက်ရေအရင်းအမြစ်များကိုမရရှိခဲ့ပါ 600 သန်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် (ပုံ - ၆)
တိုးတက်လာသောသောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှုမရှိသည့်လူ ဦး ရေသည်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်အတွင်းဒေသအားလုံး၌ကျဆင်းခဲ့သည် ဆာဟာရအာဖရိက.
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ရေအရင်းအမြစ်တိုးတက်မှုရရှိမှုနှုန်းသည်ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းတွင်နိမ့်ကျပြီးကျန်နှုန်းများမှာကွဲပြားသည် 40% သို့ 80% အိမ်ထောင်စုများ။ ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းရှိသောက်ရေသောက်သုံးရေမရရှိနိုင်သောလူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည် 271 သန်း 1990 အတွက် 326 သန်း 2015 ၌တည်၏။
ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းရှိသောက်သုံးရေမရရှိနိုင်မှုကိုစီးပွားရေးမလုံလောက်ခြင်း၊ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရေသန့်စင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်ဈေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေရန်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပြုတ်ပါကဗက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများပျောက်ကွယ်သွားပြီးရေမှအညစ်အကြေးများအားလုံးဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့နောက်သောက်ရေအတွက်သင့်လျော်သော microporous ဆန်များမှတဆင့်ဖိအားပေးသည်။
ရေ 3. Filtration
ဤနည်းလမ်းသည်ရေသန့်စင်စေရန်နှင့်သောက်သုံးရန်အတွက်ဘေးကင်းစေရန်ဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုအသုံးပြုသည်။ Filtration သည်ကြီးမားသောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်သေးငယ်။ အန္တရာယ်ရှိသောညစ်ညမ်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
filtration သည်တွင်းထွက်ဆားအားလုံးပျက်စီးခြင်းမရှိသောကြောင့်စစ်ထုတ်ထားသောရေသည်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်သန့်စင်သောရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုကျန်းမာသည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ filtration ကိုကုန်ကျစရိတ်နည်းစေသည့်အချက်သည် reverse osmosis နှင့် distillation တွင်လိုအပ်သောစွမ်းအင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်စွမ်းအင်များစွာမလိုအပ်ပါ။
Electrochlorination သည်အလွန်အမင်းထိရောက်သော၊ ရေသက်သာစေသောနည်းဖြစ်သည်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်၎င်းကိုကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံးမှာအတိုင်းအတာအရ၊ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများရှိကိုယ်ပိုင် electrochlorination ယူနစ်များမှသည်တစ်မြို့လုံးအတွက်သောက်သုံးရေကိုကုသပေးသည့်ကြီးမားသောစက်မှုဇုန်စက်ရုံများအထိအသုံးပြုသည်။
ဤပုံသည်ဝေးလံသောဒေသများတွင် electrochlorination ၏အရေးပါမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိနိုင်သည့်ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများအတွက်၎င်းသည်မည်မျှအကျိုးပြုသည်၊
သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိမှုတိုးတက်စေရန် Electrochlorination အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
() ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အချက်သုံးချက်သာလိုအပ်သည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၊ ရေနှင့်ဘုံဆား။
၅။ Smart Irrigation Controllers ကိုအသုံးပြုခြင်း
အစဉ်အလာအရအလိုအလျောက်စနစ်တိုင်တာများကိုအစားထိုးခြင်းအားဖြင့်ပိုင်ရှင်များကိုအပင်များကျန်းမာစေရန်နှင့်စမတ်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏စနစ်များကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်ထိရောက်သောရေအချိန်ဇယားကိုဖန်တီးရန်အပြင်ဘက်ရေအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်စမတ်ဆည်မြောင်းထိန်းချုပ်မှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ကျေးလက်ဒေသများတွင်သောက်ရေသန့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များမှာပြောင်းပြန် osmosis (RO) ယူနစ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကုသခြင်း၊ ရေဘီးများအသုံးပြုခြင်းနှင့် flocculating agent (ဂျယ်လတ်၊ စသည်တို့ကို) ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းသန့်ရှင်းသောရေရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ရေသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လှမ်းပါကကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ရေငတ်ပြေစေရန်ရေအလုံအလောက်မရှိသည့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းစက်မှုဖြေရှင်းချက်များကိုလေ့လာရန်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ